Su'aalaha La Weydiiyo - Shijiazhuang AoFeiTe Medical Devices Co., Ltd.
1. Sidee baan u dalban karaa amar?
Waxaad la xiriiri kartaa mid ka mid ah shaqaalaheena iibka ah amar. Fadlan bixi faahfaahinta shuruudahaaga sida ugu macquulsan. Marka waxaan kuu soo diri karnaa dalabka markii ugu horeysay.Qorsheynta ama wada hadal dheeri ah, waxaa fiican inaad nala soo xiriirto Skype, TradeManger ama QQ ama WhatsApp ama siyaabo kale oo deg deg ah, haddii dib u dhac yimaado.
2. Goorma ayaan heli karaa qiimaha?
Caadi ahaan waxaan soo xiganaa 24 saacadood gudahood ka dib marka aan helno baaritaankaaga.
3. Ma noo samayn kartaa naqshadeynta?
Haa. Waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo khibrad u leh sanduuqa Hadiyada, Logo, Bacda xirxiraya iyo wixii la mid ah naqshadeynta iyo soo saarista. Kaliya noo sheeg fikradahaaga waxaanan kaa caawin doonaa sidii aan fikradahaaga ugu fulin lahayn wax soo saar wanaagsan.
4. Muddo intee le'eg ayaan filan karaa in tijaabada la ii qaado?
Ka dib markaad bixiso khidmadda muunadda oo aad noo soo dirto faylal la xaqiijiyay, shaybaaradu waxay diyaar u yihiin inay keenaan 1-3 maalmood Shaybaarada ayaa laguugu soo diri doonaa adoo isticmaalaya xawaare sare waxayna imaanayaan 3-5 maalmood. Waxaan ku bixin karnaa muunada lacag la'aan laakiin waxaan bixinaa kharashka xamuulka
5. Ka waran waqtiga hogaaminta ee soosaarka tirada badan?
Si daacadnimo ah, waxay kuxirantahay tirada amarka iyo xiliga aad amarka bixiso.Markasta 10-30 maalmood oo kusalaysan amar guud.
6. Waa maxay shuruudahaaga bixinta?
Waxaan aqbalnaa EXW, FOB, CFR, CIF, iwm Waxaad dooran kartaa midka kuugu haboon ama ugu waxtarka badan adiga.
7. Waa maxay habka lacag-bixinta?
1) Waxaan aqbalnaa Paypal, TT, Wester Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram, iwm.
2) ODM, OEM si, 30% ka hor, dheelitirka ka hor shipping.
8.Ma tahay shirkad xaqiiqo ah ama shirkad ganacsi?
Waxaan nahay warshad, waxaan damaanad qaadi karnaa in qiimaheena uu yahay gacanta koowaad, Tayo sare iyo qiimo tartan leh.
9.Waxay ku xiran tahay warshaddaadu? Sideen ku booqan karaa halkaas?
Warshaddeena oo lagu soo raray Shijiazhuang, Shiinaha, waxaad halkan ku imaan kartaa adigoo diyaarad ku tagaya garoonka diyaaradaha Shijiazhuang ama garoonka diyaaradaha Beijing, waana ku soo qaadan doonaa.
10.Sidee ayey warshaddaadu u eegaysaa dhanka tayada xakamaynta?
Si loo hubiyo in macaamilku ka iibsado wax soo saar iyo adeeg tayo fiican leh inta aan la dalban macaamiisha, waxaan u diri doonaa shaybaar walba macmiilka si loo ansixiyo. Ka hor inta aan la soo dirin, shaqaalaheena Aofeite waxay hubin doonaan 1pcs oo tayo leh 1pcs.Quality waa dhaqankeena.
Maxaad Noogu Dooranaysaa Aofeite?
Warshad dhab ah oo leh mashiinno iyo shaqaale xirfad leh
2.Khubaro khibrad u leh ganacsiga dibada, Adeeg tayo sare leh
Waxaan aqbali karnaa amar yar iyo amar OEM / ODM
4. Logo loo habeeyay, sumadda wax lagu dhaqo, xirmo, kaarka midabka, sanduuqa midabka aqbal.
5. Nakhshadeeye naqshadeeye iyo shaqaale xirfad leh ayaa soo saari kara wax soo saar adiga gaar ah.
Tayada heerka 6.High, oo leh shahaadada CE, FDA, SGS iyo ISO
7.Qiimaha tartanka iyo bixinta degdegga ah, dhammaan habka maraakiibta waa la aqbalaa
Qaabka lacag bixinta ee kala duwan, LC, TT, Western Union, Gram Money iyo paypal
Dammaanad-qaadashada waqtiga dheer iyo iibinta kadib
10.Waa rabitaankeena inaan si weyn u weyno macaamiishayada